Maninona ny Marketing amin'ny Video no mitondra ny varotra | Martech Zone
Maninona no mitarika fivarotana ny marketing amin'ny horonan-tsary
Zoma, Oktobra 18, 2013 Alarobia, Oktobra 16, 2013 Douglas Karr
Mino aho fa hisy andro iray izay ny tranonkala antonony dia hampidirina am-pitandremana ny horonan-tsary isaky ny pejy ary saika ny lahatsoratra rehetra navoaka. Ny vidin'ny fandraketana, ny famoahana ary ny fizarana atiny video dia nihena be, nahatonga azy io ho saika ho an'ny orinasa rehetra. Izany dia nilaza fa mbola te hampiaiky ny mpitsidika anao ianao ary hialana amin'ny feo, fampifangaroana, rakipeo na famokarana.
Ny vidéo dia manana ny fahaizana mety ho fitaovana matanjaka amin'ny tanjon'ny varotra B2B noho ny fahafahany manabe, manangana fitokisana sy fahatokisana ny ekipanao, ny vokatra ary ny serivisy. Satria ny famoronana sori-dalan'ny horonan-tsary dia mety hampitombo ny vola miditra amin'ny varotrao.
MultiVisionDigital dia Serivisy Marketing amin'ny Internet an-tserasera any New York City & New Jersey ary manome antontan'isa vitsivitsy momba ny fiantraikan'ny horonantsary amin'ny paikadim-barotra B2B anao.
Tags: b2b marketingny vidin'ny vidin'ny vidéovideo marketingstatistikan'ny marketing amin'ny horonan-tsary
Findability - Fitsipika 21 vaovao momba ny marketing amin'ny atiny
Fomba 15 hampitomboana ny lisitry ny varotra mailakao
20 Okt 2013 amin'ny 7:28 PM
Salama Douglas. Infographic mahafinaritra! Orinasa iray manao fanentanana amin'ny horonan-tsary B2B be dia be ny Cisco. Mamoaka votoaty marobe izy ireo, ao anatin'izany ny Q & As, ny fampisehoana vokatra sy ny fampisehoana izay manao asa mahatalanjona amin'ny fampandraisana anjara sy fanabeazana ny mpihaino azy amin'ny olana maro samihafa.